Baydhabo oo maanta lagu doortay afar Xildhibaan | Dhacdo
Home Wararka Maanta Baydhabo oo maanta lagu doortay afar Xildhibaan
Baydhabo oo maanta lagu doortay afar Xildhibaan
Magaalada Baydhabo ee Xarunta KMG ee Koonfur Galbeed ayaa waxaa maanta lagu doortay afar ka mida kuraasta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka.
Kursiga #HOP103 oo buuq uu hareeyay ayaa waxaa 78 cod ku guuleystay Maxamed Cali Xasan, oo ah Wasiirka Howlaha Guud Koonfur Galbeed, halka musharaxii la tartamaay oo lagu magacaabo Mukhtaar Cali Ibraahim uu helay 18 cod.
Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe) ayaa ku soo baxay kursiga #HOP189, ka dib markii uu 63 cod kaga guuleystay musharxii la tartamayay oo lagu magacaabo Xasan Cali Maxamed, kaasoo helay 11 cod.
Doorashada kursiga 3aad oo la guda galay ayaa waxaa ku tartamay Cabdirisaaq Xaaji Cabdi (Midnimo) iyo Maxamed Cali Sheekh. Cabdirisaaq Midnimo ayaana ku guuleystay kursiga uu tirsigiisu yahay #HOP042, ka dib markii uu helay 80 cod, halka musharaxii la tartamayayna uu helay 15 cod.
Kursiga ugu dambeeyo oo tirsigiisu ahaa #HOP041 ayaa waxaa ku guuleysatay Nuura Mustaf Mukhtaar. Nuura ayaa heshay 83 cod, halka gabadhii la tartameysay oo lagu magacaabo Muno Aadan Maxamed ay heshay 15 cod.
Previous articleYaasiin Farey oo dhuunta loo galay
Next articleMarkabkii ugu horeeyay oo maanta ku soo xirtay Dekedda Garacad